Manomboka sidina mankany Frankfurt ny Cobalt Air
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manomboka sidina mankany Frankfurt ny Cobalt Air
Cobalt Air, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any Sipra, dia reharehany nanambara serivisy vaovao indroa isan-kerinandro amin'ity ririnina ity mampifandray mivantana ny seranam-piaramanidina Frankfurt miaraka amin'i Larnaca, izay nanomboka tamin'ny 1 Novambra. Vokatry ny fanitarana farany an'ny Cobalt Air, ny zotram-piaramanidina dia manome sidina voalohany indrindra avy any Sipra mankany amin'ny foibe ara-bola Alemanina, miaraka amin'ny sampan-draharaha miantona any Frankfurt amin'ny 13:15 ny alarobia sy zoma.
“Faly aho fa ny sidina Cobalt Air izao dia manidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt, seranam-piaramanidina be olona sy manandanja indrindra any Alemana, avy any Larnaca. Ny Cobalt Air dia lasa zotram-piaramanidina ankafizin'ny mponina any Sipra ary tsy afaka miandry izahay hampiseho amin'izy ireo ny fandraisana tsara sy ny serivisy an-tsambo rehefa manomboka ny fialantsasatra na ny dia ataon'izy ireo avy any Frankfurt mankany Sipra.
“Ary tena reharehako koa ny olontsika. Ao amin'ny Cobalt Air dia fantatray ny lanjan'ny fahamendrehana, ny vidin'ny fifaninanana ary ny tena fikarakarana mpanjifa mifantoka - izay nekena tao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny seranam-piaramanidina eran-tany tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
“Tena hafa tokoa isika. Tsy lova, fa tsy LCC, Cobalt Air fotsiny. ”
Cobalt Air izao dia manompo toerana 16 manerana ny firenena 10 samy hafa avy amin'ny toby Larnaca sy Paphos any Sipra. Nekena erak'izao tontolo izao ho toy ny CAPA Airline Start-Up an'ny taona 2017 tamin'ny lanonana fankalazana iraisam-pirenena tany London ny volana lasa teo.
Anke Giesen, Tale Mpanatanteraka Operations, Fraport AG naneho hevitra:
“Faly be izahay mandray an'i Cobalt Air eto amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Ny fifandraisana natolotry ny kaompaniam-pitaterana an'habakabak'i Sipra dia fampidirana tsara ho an'ny tambajotram-pifandraisana eto Frankfurt ho any amin'ny toerana itobiana malaza Mediteraneana. Mirary fiononana sambatra maro ho an'ny Cobalt Air ao amin'ny FRA. ”
Fandaharam-potoana fiasa avy any LARNACA mankany FRANKFURT W17 / 18
Avy amin'ny ka hatramin'ny ka hatramin'ny
CO 378 - Andro 3, 5 CO 379 - Andro 3, 5
Ny governemanta dia manamafy ny fahavononany hampitombo ny sehatry ny hetsika any Britain